DUBAI: Ohatra iray amin'ny fampandrosoana | Asa - Karama - Travel avy any Zero ka ho an'ny mahery fo!
Teny nalaina avy amin'ny Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Sarotra ny mino sy mahavariana fa lasa i Dubai
Sary: Sarin'i Dubai amin'ny 1960 sy 1970 mampiseho ny tanàn-dehibe ho fampandrosoana tany an-tany: ny lakandranon'i Clocktower any amin'ny manodidina an'i Deira dia voahodidin'ny fasika ...
Ho an'ity toerana mahagaga ity
Ary mbola mavitrika, isan'andro dia misy fiovana vaovao eo amin'ny manodidina. Ity faritry ny Emira Arabo Mitambatra ity dia ohatra miavaka amin'ny antsointsika hoe fivoarana. Ny sisa amin'ny tontolo dia gaga tanteraka tamin'ny fomba ahoana no nahatonga ny sombin-tany tsy hay, sandy ary tany an-tany hipoitra ho toy ny ankehitriny. Raha tsy misy loharanom-pahefana sy teknolojia, io tanàna io dia niova tamin'ny fanamby toy izany ary nandresy ireo izay manana loko manidina. Manome ahy ny hafaliako rehefa miezaka maka sary an-tsaina aho hoe hatraiza hatraiza no nahatratrarana io tarehimarika io fa amin'ny ankapobeny izao dia miteraka ny famerenany manokana izy ireo, manangana tranokala goavana manerantany sy ny teknolojia tarihina.
Ny faritra dia nanohanana ny fanjonoana sy ny perla taipaika nandritra ny arivo taona, ary ny firaketana voalohany momba ny tanàna dia natao tamin'ny 1799 rehefa nametraka azy io ho fandaniana an'i Abu Dhabi ny Bani Yas.
Dubai dia nanjary Sheikhdom iray hafa tao 1833 rehefa noraisin'ny tafika Al-Maktoum tamina tamim-pilaminana. Ny Fahaketrahana lehibe nataon'ny 1929 dia nahatonga faharavana tao amin'ny tsenan'ny pearl iraisam-pirenena, Sheikh Saeed nitady loharanom-bola hafa inviting Indian ary ireo mpivarotra Iraniana eto tsy mandoa hetra. Miaraka amin'ny solika hita ao amin'ny 1966, niova ny firenen'ny tsy fankasitrahana ary nitarika an'i Dubai ho lasa tanàna mivoatra, maoderina sy fandraharahana ara-barotra. Tsia, ny firenen-kafa rehetra dia nieritreritra fa raha ny tanànan'ny Golfa tsy misy tanàn-dehibe dia hanana anjara lehibe amin'ny toekarena manerantany.
Amin'izao fotoana izao, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum no filoha lefitry ny Emira Arabo Mitambatra ary mpitondra ao Emirà ao Dubai ary ny minisitry ny minisitra dia miasa am-pahamendrehana ny fenitra ary koa mahatonga azy io ho hery goavana amin'ny paikady diplomatika sy ny fifandraisana iraisam-pirenena.
Ny vokatra tsara indrindra amin'ny ezaka ataon'izy ireo dia ny fanombohan'ny EXPO 2020, izany dia hampiantranoin'i Dubai izay nomena tamin'ny Bureau International Des Expositions General Assembly ao Paris tamin'ny 27 2013 tamin'ny XNUMX. Ny Expo dia andrasana hanampiana diplaoma lehibe maro ho an'ny toekarenan'i Dubai sy ny Emirà Arabo Mitambatra.
Ity tany ity dia ary ho toy ny magnétisme lehibe ho an'ny tsena ekonomika.